Toftaa Haaraa ittiin Ethiopia to’atee oromiyaa diiguu danda’an ifa godhee jira EZEMA n habashoota. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsToftaa Haaraa ittiin Ethiopia to’atee oromiyaa diiguu danda’an ifa godhee jira EZEMA n habashoota.
Toftaa Haaraa ittiin Ethiopia to’atee oromiyaa diiguu danda’an ifa godhee jira EZEMAn habashoota.
Oromiyaa to’achuuf toftaan isaanii Warra habashootaa Afaan oromoo dubbachuu danda’an fi oromoo Oromoo jibbu fayyadamanii filannoof qopha’uu. Madda mallaqa guddaa Deeggarsa Bakka argatan biyyoota alaa Bakka hundatti qindeessitoota ramaduun warreen maallaqa guddaa qaban kakaasuun hunda caalaanii cimuu. kkf Taaktika haaraa karoora isaani Tv ESAT irratti dabarsaa jiru.
Oromoonis keessaa alaa wal ijaaruun jarattii garee minilik dulloomaa qabattee kana osoo hundee Hin qabne seenaa sobaa fi hawwii isaanii qileensa irratti hambisuun dirqama oromoo hundaa yeroon gaafatuudha.
Ani gahee Kiyya nan Baha atihoo ??
Kanuma furmaanni.Raachii iyyeef malkaan kan isaa Hin ta’u !
Oromoon hojii gochaan caalee argamuu malee jibba qofaan Injifannoon manatti namaaf kennamu Hin jiru.Miidhaksaa Abbishuu